Nongedzo dzemunamato kubva kuna Mapisarema 25 | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Pfungwa dzemunamato kubva kuna Mapisarema 25
Pfungwa dzemunamato kubva kuna Mapisarema 25
Nhasi tichave tichiongorora bhuku rePisarema 25. Tichave tichitarisa pamunamato une simba kubva kuna Mapisarema 25. Aya Mapisarema seMamwe Mapisarema mazhinji akanyorwa naMambo David mutongi weIzirairi uye mambo mukurusa ati ambobata nyika. Mapisarema 25 rwiyo rwekukumbira kuna Mwari Wemasimbaose kuti atiratidze ngoni netsitsi kwatinonyanya kuda.
Zvakare, Mapisarema 25 ari kukumbira kuna Mwari kuti atinunure kubva mukunyomba kwevanhu. Munyika ino yatiri kurarama mairi, vanhu vanoverengeka vakamirira kutsungirira kwedu kunyanya sevaKristu kuitira kuti vagone kutinyomba uye kutaura zvakaipa pamusoro paMwari watinoshumira. Mambo David senge vazhinji vedu kuti vanhu ava vakamumirira vanyadziswe, Mapisarema 25 akanyorwa kukumbira kuna Mwari kuti amununure kubva pakuronga kwevavengi vake. Saka nesuwo isu tinodana kuzita raMwari siku nesikati uye isu takaramba kukanganisa kutenda kwedu, Mapisarema 25 rinofanira kuve rwiyo rwedu masikati nousiku kugara tichiyeuchidza Mwari kuti vayeuke zvipikirwa zvake nezveavo vanotenda maari.
Tasimbisa chokwadi chekuti Mapisarema 25 anonyanya kutaura nezvekukumbira kuna Mwari kuti atinunure kubva kuzvidzwa kana kunyadziswa, zvakakosha kuti isu tiongorore yega yega rugwaro runoshamisa iyi kuti unzwisise zviri nani.
Mapisarema 25 Zvinoreva Ndima Ndima
Verse 1 & 2 Kwamuri, Ishe, ndinosimudzira mweya wangu. Mwari wangu, ndinovimba nemi; Ngandirege kunyadziswa; Vavengi vangu ngavarege kundikunda
Ndima yekutanga neyechipiri yePisarema 25 iri kutaura nezvekuzvipira kwakazara kwehupenyu hwedu kuna Mwari, tichikanda zvido zvedu zvese paari semunyori nemukwanisi wekutenda kwedu. Mavhesi maviri ekutanga ari kukumbirawo kuti Mwari havafanire kuodza moyo zvatinotarisira. Rangarira kuti rugwaro runoti zvinotarisirwa nevakarurama hazvizotapudzwa. Zvakare, mavhesi aya ari kutsvaga kukunda kwaMwari pamusoro pemuvengi.
Vesi 3 & 4 Zvirokwazvo ngapasava nemunhu anomirira pauri achanyara; Ngavanyadziswe vanonyengera pasina chikonzero. Ndiratidzei nzira dzenyu, Jehovha; Ndidzidzisei nzira dzenyu.
Ndima yechitatu neina yePisarema 25 iri kutaurawo nezvekuteterera kuna Mwari Wemasimbaose. Mundima idzi, Mambo David vaikumbira Mwari kuti vasanyadzisa uye akakumbira Mwari kuti aise avo vanonyengera vanyengedze. Zvakare mune aya mavhesi, tinogona kukumbira kuziva nzira yaMwari.
Ndima 5 & 6 Ndifambisei muchokwadi chenyu uye mundidzidzise, ​​nekuti ndimi Mwari muponesi wangu; Pauri, ini ndinomirira zuva rose. Rangarirai, imi Jehovha, tsitsi dzenyu nenyasha dzenyu, nekuti ndidzo dzakare nakare.
Ndima yechishanu neyegumi nenomwe yePisarema 25 yakaratidza murume anotsvaga zano raMwari pamusoro pezvese zvaanoita. Ndima mazuva mashanu anonditungamira muchokwadi chenyu uye mundidzidzise; izvi zvinotsanangura kuti sevanhu hatizive isu pachedu, kunze kwekunge Mwari vadzidzisa uye vatiratidza nzira yekufamba, tingave tichifamba murima.
Ndima 7 & 8 Usarangarira zvivi zvouduku hwangu, kana kudarika kwangu; Maererano netsitsi dzenyu ndirangarirei, Nokuda kwokunaka kwenyu, Ishe.
Ndima 7 ne8 yePisarema iri vari kukumbira Mwari ruregerero kunyanya nezvezvivi zvakaitwa nemunhu mumazuva ehudiki. Mazuva evechidiki pano haarevi kuti isu tiri vega vega, zvinogona zvakare kureva mazuva edu anotyisa tisati tagamuchira Kristu saIshe nemuponesi. Vazhinji vedu takaita zvinhu zvinotyisa tichiri munyika. Saka ndima iyi iri kukumbira tsitsi dzaMwari pahupenyu hwedu uye ichitsvaga ruregerero pane zvakaipa zvese zvatakaita.
Ndima 8 & 9 Ishe vakanaka uye vakatendeka; Naizvozvo anodzidzisa vatadzi nzira. Anozvininipisa anotungamira mukutonga, uye anozvininipisa anodzidzisa nzira yake.
Aya mavhesi maviri anobvuma chokwadi chekuti Mwari akarurama uye akatwasuka pane zvaanoita. Mwari vanonzwisisa kuti mutadzi akafanana nemwana anotadza asingazivi chinhu, saka Mwari pachake anodzidzisa mutadzi chikamu kusvika pakururama. Chimiro chechisikirwo chemurume chinoratidzwa neuipi, zvakadaro, mweya waMwari unobatsira kudzidzisa mutadzi nzira yaMwari.
Ndima 10 & 11 Dzese nzira dzaIshe ingoni uye chokwadi, Kune avo vanochengeta sungano yake nezvipupuriro zvake. Nokuda kwezita renyu, Ishe, Kangamwirai zvakaipa zvangu, nekuti zvikuru.
Mwari ndiye Wokumusoro-soro, haambopfidza mumashoko ake. Aya mavhesi maviri akaziva chokwadi chekuti nzira yaMwari ndeye tsitsi nezvokwadi uye Mwari anogarochengeta sungano yake. Mukukosha, kana Mwari akavimbisa chimwe chinhu, chokwadi achazadzisa. Chikamu chayo chekupedzisira chevhesi ichi chinokumbira Mwari kuti tiregererwe zvakaipa zvese izvo zvinogona kutadzisa zvipikirwa zvaMwari kuzadzika.
Ndima 12 & 13 Ndiani murume anotya Jehovha? Iye Achadzidzisa nenzira yaAnosarudza. Iye achagara zvakanaka, Navana vake vachagara nhaka yenyika.
Rangarirai rugwaro runoti kutya Ishe ndiko kutanga kweUchenjeri. Ndima iyi yakasimbisa kuti munhu anotya Ishe, Mwari achamudzidzisa nzira dzake. Uyu murume haazofambe kubva muIda kwaMwari kwehupenyu hwake. Rudzi urwu rwemunhu runogara ruchizadzisa chinangwa zvisinei nekuti zvainge zvakaomarara nekuti Mwari vachananga nhanho dzake munzira yekuenda.
Ndima 14 & 15 Chakavanzika chaIshe chiri kune avo vanomutya, Uye Iye achavaratidza sungano Yake. Meso angu anoramba achitarira kuna Jehovha, nekuti anobvisa tsoka dzangu pamumbure.
Chakavanzika chaIshe ndechevanotya Jehovha. Izvi zvinoreva kuti D haavanze chero chinhu kubva kumurume anomutya nekumuteerera. Muenzaniso unoshanda ndiBaba Abhurahamu, Abrahama akateerera Mwari nekuti aitya Mwari. Uye Bhaibheri rakanyora kuti Mwari akati handizoita chero chinhu ndisina kuudza shamwari yangu Abraham. Hapana chinobata munhu akadaro asingazive; hapana chinotora munhu akadaro nekushamisika. Mwari vachaburitsa pachena zvinhu zvakadzama nezvimwe zvakavanzika kumunhu akadaro.
Vhesi 16 & 17 Tendeukira kwandiri uye unzwire tsitsi, Nokuti ndiri ndoga uye ndinotambudzika. Matambudziko emwoyo wangu awanda; Ndibudisei mumatambudziko angu!
Ndima 16 ne17 dziri kukumbira Mwari kuti avanzwire ngoni pamusoro pekutambudzika. Zvinodaro tendeukira kwandiri uye unzwire tsitsi. Chero munhu anoonekwa saiye zvechokwadi achawana tsitsi.
Ndima 18 & 19 Tarisa kutambudzika kwangu uye kurwadziwa kwangu Uye undiregerere zvivi zvangu zvese. Cherekedzai vavengi vangu, nekuti vazhinji, Uye vanondivenga nekuvenga kwakaipa.
Paunenge usina kwaungatendeukira kwaari, ndiyo nguva yakanakisa yekudzoka kuna Mwari muminamato. Aya mavhesi ePisarema ari kukumbira Mwari kuti vatarise kwaari kuti vaone kutambudzika kwake, varegerere zvivi zvake uye vamuponese. Rangarira, kuti kwamakore evana veIsrael vaive muEjipita kudzamara vakachemera kuna Mwari ndipo pakazouya rubatsiro.
Ndima 20 & 21 Chengetedza mweya wangu, uye undinunure; Ngandirege kunyadziswa, nokuti ndinovimba nemi. Kusanyengera nokururama ngazvindichengete, nekuti ndinokumirirai.
Ndima yekupedzisira iyi yePisarema 25 iri kukumbira Mwari kununura mweya wake. Ndima iyi iri kudzokorora chokwadi chekuti akaisa tariro yake muna She uye haafanire kutungamirwa.
Kununura Israeri, O Mwari, kubva pamatambudziko avo ose!
David akapedzisa Pisarema nekukumbira kuna Mwari kuti ruregerero rweIsrael rwuve nembiri yarwo yekutanga.
Ndiri kuda ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri kana,
Iwe unogona kunge uchinetseka kuti ndepapi paunoda Pisarema iri, unogona kutarisa pazasi kwemamwe mamiriro apo iwe unofanirwa kushandisa Mapisarema 25
Chero iwe paunenge uchinetseka nezveramangwana
Paunenge uchitya kuti unganyadziswa
Kana paine mhandu dzakawanda dzichitsvaga kupunzika kwako
Kana iwe uchida kuratidzwa kubva kuna Mwari nezve zvimwe zvinhu
Pese paunoda kutaura munamato wekuregererwa
Mapisarema 25 Minyengetero Pfungwa
Ishe Mwari, ndinonamata kuti nengoni dzenyu mundidzidzise nzira yekufamba muhupenyu muzita raJesu.
Ishe, izwi renyu rinoti chakavanzika chaIshe kune avo vanomutya, ini ndinokumbira kuti mutange kundizivisa zvinhu zvakavanzika muzita raJesu.
Ini ndinonamatira kuregererwa kwezvitadzo zvangu nezvakaipa, Ishe ndiregerereiwo muzita raJesu.
Baba Vakarurama, ndinokumbira kuti mundisunungure uye kuti ndisanyadziswa muzita raJesu.
Mwari wetsitsi! Ndinzwirei tsitsi nhasi uye ngoni dzenyu ngadzibvise kwandiri kune vanotsvaga rufu rwangu muzita raJesu.
Ah Ishe, nengoni dzenyu nyararai izwi roga roga ra satan rinotaura richindipokana kuparadza hupenyu hwangu muzita raJesu.
Ah Lord! Shandisa zvese zvakandikomberedza kuti undifarire mune zita raJesu Amen.
Ah Lord! Ini ndinotsvaga chiso chako semwana anotsvaga kumeso kwevabereki. Ndiratidze tsitsi dzako munzvimbo dzose dzehupenyu hwangu muzita raJesu.
Aiwa, Ishe, ndinodana kwamuri munhamo yangu nhasi. Ndinzwe unzwire tsitsi neni muzita raJesu.
Ishe, moyo wangu ngauzadzwe nemufaro apo munopindura minamato yangu maringe netsitsi dzenyu munaJesu zita.
Aiwa, Ishe, ndinoparidza kuti kunaka uye ngoni dzenyu hadzingatongobvi kwandiri muzita raJesu.
O Ishe, pindirai mune iyi nyaya yehupenyu hwangu (taura nyaya yacho) ndisati ndaita chiseko pamberi pevavengi vangu. Ndinzwirei ngoni vavengi vangu vasati vaona zviratidzo zvekunetseka kwangu muzita raJesu.
Ah Ishe, ini ndinoda rubatsiro panguva ino. Ndibatsireiwo panhau iyi zvisati zvanyanya kunyura muzita raJesu.
Ah ishe, ndimi Mwari unosimudza varombo kubva muguruva, vanoshaya kubva mugomo remarara, ndiratidzei ngoni dzenyu Tenzi ndipindireiwo mune izvi mune zita raJesu
Aiwa, Ishe, sekuti ini ndinokushandirai nguva dzose, tsitsi dzenyu dzigare dzichiwedzera kutonga muhupenyu hwangu muna Jesu
Mwari wetsitsi, simuka mundidzivirire kubva kunhema dzese dzekupomera muvengi muzita raJesu.
Ah Lord, zvinonetsa zvehupenyu hwangu zvakawandisa, vakasimba kwandiri kuti vandibate vandiratidza ngoni dzenyu uye mundibatsire muzita raJesu.
Ah Ishe ndinzwireiwo tsitsi nhasi. Usaite kuti vavengi vangu vandiise mukati megomba muzita raJesu.
Jesu Kristu mwanakomana waDavid, ndinzwireiwo tsitsi uye murwe hondo dzehupenyu hwangu muzita raJesu.
Ah ishe ndinzwireiwo tsitsi uye musimudze vabatsiri kwandiri panguva ino yehupenyu hwangu muzita raJesu.
Previous nyayaMapisarema 13 Iwo Mharidzo Ndima Ndima
inoteveraMapisarema 68 Iwo Mharidzo Ndima Ndima
Chirevo Chine Simba Kupesana Nokusingafi Rufu